Global Voices teny Malagasy » Ry Mpitia ny Maritranon’i Myanmar, Ataovy Afa-Po Amin’ireto Sary avy any Yangon ireto ny Masonao · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Novambra 2014 3:12 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Myanmar (Birmania), Fampandrosoana, Mediam-bahoaka, Siansa, Tantara, Zavakanto & Kolontsaina
Marika ahafantarana indrindra an'i Yangon, ny Pagoda Shwedagon. Saripikan'i Manuel Oka hoan'ny Tari-dalana ara-maritranon'i Yangon (DOM Publishers, 2015)
Yangon (fantatra taloha amin'ny hoe Rangoon) no renivohitr'i Myanmar talohan'ny namindran'ny governemanta miaramila ny foibe ho any Naypyidaw tamin'ny 2006. Na dia tsy renivohitra intsony aza izy, dia mbola tazoniny hatrany ny maha-foibe voalohany ara-barotra sy ny maha-tanàna lehibe indrindra azy ao amin'ny firenena. Fanta-daza ihany koa izy noho ny hamaroan'ny fanorenana manan-tantara ao aminy sy ireo tsangambato ara-pivavahana ao aminy.
Ny “Harem-bakoka ara-maritranon'i” Yangon no asongadin'ny boky hivoaka tsy ho ela nosoratan'i Manuel Oka, Ben Bansal, ary Elliott Fox. Nandritra ny fikarakaran-dry zareo ny boky no nananganany pejy Facebook  sy Tumblr , izay ahafahan'ny mpitsidika mahita ny sarin'ireo fanorenana malaza sy tsy dia malaza ao Yangon. Nangataka tamin'ny Birmana mpiserasera ihany koa ry zareo handefa sary miaraka amin'ny fanazavazavana momba ilay fanorenana ao amin'ny tranonkala.
Nifampiresaka tamin'i Ben Bansal momba ny tetikasa ny Global Voices vao tsy ela akory izay :
Mong Palatino (MP): Inona no nahatonga anareo hanomboka ity tetikasa ity?
Ben Bansal (BB): Telo izahay no mpanoratra: izaho, i Manuel ary i Elliott. Samy manana ny fomba fijerinay izahay. Mpandalina ara-toekarenam-pampandrosoana aho sy variana amin'ny tantaran'ny tanàna sy ny fomba fivoarany. Manu, izay mpakasarinay, dia mpanao maritrano ihany koa. Misapaoritra aminy izahay amin'ireo sary mahatalanjona ao amin'ny boky sy ny fahalalàna ara-teknika ananany. Elliott indray dia miasa ao amin'ny sehatry ny fanampiana mahaolona sy ny zon'olombelona. Manam-pahitana kokoa amin'ny politika maoderin'i Myanmar izy. Miteny tsirairay amintsika i Yangon. Manantena izahay fa hitondra izany rehetra izany ny boky.
MP: Nanao ahoana ny setriny avy amin'ny mpiserasera sy manampahefana birmana?
BB: Nahafinaritra tokoa ny Birmana mpiserasera! Nanokatra pejy Facebook iray  izahay, namoaka sary iray isan'andro miaraka amin'ny fanontaniana iray. Tao anatin'ny volana vitsivitsy izahay dia efa nahangona mpanjohy mihoatra ny 6000, ary miharihary fa Birmana ny ankamaroan'izy ireo. Isaky ny fanorenana lehibe iray dia misy olona iray manome sombim-pampahafantarana anay azonay ampiasaina. Ao amin'izany zotra izany, dia miatrika fandraisana anjaran'ny besinimaro izahay! Tsy nahazo akony avy amin'ny manampahefana Birmana izahay.
MP: Inona no eriteretinareo hiarovana sy hampalaza ireo fanorenana manantantara ao Yangon ireo?
BB: Nahavita zavatra iankinan'ny ain-dehibe sy manome aingam-panahy ny Fikambanana MIsahana ny Vakok'i Yangon tamin'ny fananganana tondrozotram-Piarovana. Nahavita be ihany koa ry zareo tamin'ny fanerena ny governemanta. Manantena izahay ankehitriny fa hihaino azy ireo tsara ny governemanta. Maro ny marika ara-tantaran'i Kuala Lumpur na i Singapore, ohatra. Saingy ilaina ihany koa ny manasongadina fa matetika no miraikitra amin'ny vakoka ara-panjanahantany ny olona. Manantena izahay fa hanasongadina tantara mivelatra kokoa ny boky: Manana ny lafina mahatalanjona amin'ny tantarany ihany koa ny maritrano aorian'ny taona 1948. Ary misy ihany koa ny vakoka ara-pivavahana mahazendana ao an-tanàna: Bodhista, Kristianina, Haindò, Jiosy, Miozolomana. Raha mahavita maharo izany tantara izany tsy ho simba i Yangon, dia ho fitaratra hoan'izao tontolo izao izany.
Indreto ambany ireto ny sasantsasany amin'ny fanorenan'i Yangon izay mampiseho ny hamaroana sy ny mampiavaka manokana ny maritranon'ny tanàna:
“Ny Katediralin'ny Trinite Masina no fiangonana Anglikana lehibe indrindra ao Yangon.” Saripikan'i Manuel Oka hoan'ny Taridalana Ara-Maritranon'i Yangon [Yangon Architectural Guide] (DOM Publishers, 2015)
Ny Foibe tao aloha an'ny Burmah Oil. Saripikan'i Manuel Oka hoan'ny Yangon Architectural Guide (DOM Publishers, 2015)
Moskea Sonita Surti Jamah ao amin'ny lalana Shwebontha. Saripikan'i Manuel Oka hoan'ny Tari-dalana ara-maritranon'i Yangon (DOM Publishers, 2015)
Naorina tamin'ny 1920, fonenan'ny Kayah (Karenni) governoram-panjakana teo aloha. Saripikan'i Manuel Oka hoan'ny Taridalana ara-maritranon'i Yangon [Yangon Architectural Guide] (DOM Publishers, 2015)
Karazan-dapa sady Efitra lehiben'ny trano fisakafoanana Karaweik. Saripikan'i Manuel Oka hoan'ny Yangon Architectural Guide (DOM Publishers, 2015)
Lapan'ny Tanànan'i Yangon. Saripikan'i Manuel Oka hoan'ny Tari-dalana ara-maritranon'i Yangon (DOM Publishers, 2015)
Tsangambaton'ny fahaleovantena manakaiky ny lapan'ny fitsarana ambony teo aloha. Saripikan'i Manuel Oka hoan'ny Tari-dalana ara-maritranon'i Yangon [Yangon Architectural Guide] (DOM Publishers, 2015)
Zoro ijerena an'i Yangon avy eny ambony. Saripikan'i Manuel Oka hoan'ny Yangon Architectural Guide (DOM Publishers, 2015)
Pagoda Ngadatgyi. Namboarina araka ny “Fihetsiky ny tanan'i Boddhà rehefa nahatontosa ny fahiratana izy. Saripikan'i Manuel Oka hoan'ny Tari-dalana ara-maritranon'i Yangon (DOM Publishers, 2015)
Ny sary rehetra dia an'i Manuel Oka , nahazoana alalana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/11/26/65987/